STUDENTS BOYCOTT – democracy for burma
Category: STUDENTS BOYCOTT
!! #88 #MPC #ABFSU #ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း #ပင်မ #STATEMENT #DEADLINE #blockages
On March 9, 2015 March 10, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, student protest, STUDENTS BOYCOTTLeaveacomment
https://democracyforburma.wordpress.com/2015/03/10/အောင်ေ%E1%80%BBမဗိမာန်-ဘုန်း%E1%82%80က/ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းရှိ ဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က မလေးမစားပြုသည့်သဘောရောက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ) ထုတ်ပြန် ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းတွင် သတင်းရယူနေသည့် သတင်းထောက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်နေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခုလုပ်ဆောင်မှုသည် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းရှိ ဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် မလေးမစားပြုသည့်သဘောရောက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)၏ ထုတ်ပြန်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လက်ပံတန်းမြို့တွင် ရောက်ရှိနေသော သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများနှင့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို စောင့်ကြည့်၍ ပြည်သူလူထုထံ သတင်းတင်ပြပေးနေသော သတင်းမီဒီယာသမားများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်နေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)က များစွာ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိပါသည်။ Continue reading “!! #88 #MPC #ABFSU #ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း #ပင်မ #STATEMENT #DEADLINE #blockages” →
On March 2, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, STUDENTS BOYCOTTLeaveacomment
၄။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးလမ်းကြောင်းမှ ရဟန်း ရှင် လူ ပြည်သူများ စိုးရိမ်သံသယဖြစ်နေသော ပုဒ်မအချို့အား စကားရပ်အစားထိုး၍သော်လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မအချို့ အား ပယ်ဖျက်၍သော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းပြည်နှင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာ ရေရှည်အကျိုးကိုမျှော်ကိုးလျှက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်နှင့် ထိပ်တိုက်ရန်လို ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှောင်ရှားကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါ သည်။ Continue reading “#အမျိုးသားနိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ #သဘောထားကြေညာချက်” →